၂၀၁၉ ရဲ့ ကွညျ့ရှုသူအမြားဆုံး Esports ပှဲကွီးမြား – Gaming Noodle
“၂၀၁၉ ရဲ့ ကွညျ့ရှုသူအမြားဆုံး Esports ပှဲကွီးမြား”
တဈနှဈထကျ တဈနှဈ ပိုမိုထှနျးကားလာတဲ့ Esports လောကမှာ ဂိမျးဝါသနာရှငျပရိသတျအရအေတှကျဟာလညျး မြားသထကျ မြားလာခဲ့ပါတယျ။ မကျြမှောကျခတျေ gamer မြားဟာ ယခငျကလို ဂိမျးကစားဖို့သာ အာရုံစိုကျနကွေတော့တာ မဟုတျပဲ Esports ပှဲမြားကို ကွညျ့ရှုအားပေးဖို့ ပိုမိုအခြိနျပေးလာကွတာကိုလညျး တှကွေ့ရမှာပါ။
ဒါကွောငျ့လညျး ၂၀၁၉ အတှငျး ကငျြးပခဲ့တဲ့ Esports ပှဲကွီးမြားဟာ ကွညျ့ရှုသူ အလှနျမြားပွားလာခဲ့ခွငျးဖွဈပါတယျ။ ဂိမျးအမြိုးအစားအလိုကျ ကစားသူဦးရေ မတူညီကွလို့ ယငျးဂိမျးမြားရဲ့ပှဲကွညျ့ရှုသူပရိသတျအရအေတှကျဟာလညျး အနညျးအမြား ကှာခွားသှားလရှေိ့ပါတယျ။ မညျသို့ပငျဖွဈစေ လူပေါငျးသနျးခြီ ဝငျရောကျကွညျ့ရှုနကွေတဲ့ Esports ပှဲမြားရဲ့ အနာဂတျကတော့ တောကျပလကျြ ရှိပါတယျ။
၂၀၁၉ ရဲ့ ကွညျ့ရှုမှုအမြားဆုံး Esports ပှဲမြားကတော့ အောကျပါအတိုငျး ဖွဈကွပါတယျ။
၇။ BlizzCon 2019 Opening Ceremony (အမြားဆုံးကွညျ့ရှုသူဦးရေ – ၁,၂၆၉,၄၃၆)
BlizzCon ပှဲကွီးကတော့ Blizzard ရဲ့ ပရိသတျမြား အထူးအားပေးခွငျးကိုခံခဲ့ရတဲ့ ပှဲတဈပှဲပါ။ Hearthstone နဲ့ Overwatch World Championship ပွိုငျပှဲမြား၊ ဂိမျးသဈ ကွညောခွငျးမြား၊ ဂိမျး feature သဈ ကွညောခွငျးမြား၊ cosplay ပွိုငျပှဲမြား စ တာတှကေို ပရိသတျအမြား ကွညျ့ရှုအားပေးခဲ့ကွပါတယျ။ Stream အတှငျး နိုငျငံရေးလှုံ့ဆျောစကားပွောခဲ့တဲ့ Hearthstone pro တဈဦးကို Blizzard က ban ခဲ့ပွီး ဆန်ဒပွမှုမြားဖွဈပျေါလာခဲ့တဲ့အတှကျလညျး BlizzCon ရဲ့ ကွညျ့ရှုသူဦးရေ မွငျ့တကျခဲ့ပါတယျ။
၆။ Nintendo E3 2019 (အမြားဆုံးကွညျ့ရှုသူဦးရေ – ၁,၄၄၆,၁၉၈)
Nintendo E3 Expo ပှဲကွီးမြားဟာ နှဈစဉျနှဈတိုငျး ကငျြးပလရှေိ့တဲ့ ပှဲမြားပါ။ Nintendo E3 အတှငျးမှာ Bethesda, Ubisoft, Square Enix စ တဲ့ ကုမ်ပဏီမြားရဲ့ဂိမျး developer showcase မြား၊ Super Smash Bros. Ultimate နဲ့ Fortnite တို့လို နာမညျကြျောဂိမျးမြား အပါအဝငျ ဂိမျးပေါငျးမြားစှာတို့ရဲ့ ပွိုငျပှဲငယျမြား၊ ဂိမျးသဈ ကွညောခွငျးမြား စ တာတှေ ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။ Cyberpunk 2077, Star Wars: Fallen Order စတဲ့ ဂိမျးသဈမြားကို ကွညောခဲ့တဲ့အခြိနျမှာ ပရိသတျမြား အထူးစိတျလှုပျရှားခဲ့ရပါတယျ။
၅။ Mid-Season Invitational 2019 (အမြားဆုံးကွညျ့ရှုသူဦးရေ – ၁,၇၀၄,၃၂၆)
ဒီပှဲကတော့ League of Legends season9ရဲ့ အလယျပိုငျးမှာ ပွုလုပျခဲ့တဲ့ပှဲပါ။ League of Legends MSI 2019 လို့လညျး ချေါတှငျကွတဲ့ ဒီပှဲမှာ စုစုပေါငျးအသငျး ၁၃ သငျး ပါဝငျယှဉျပွိုငျခဲ့ကွပွီး ဖိုငျနယျပှဲစဉျမြားမှာ ဥရောပအသငျး G2 Esports က မွောကျအမရေိကအသငျး Team Liquid ကို အနိုငျရရှိသှားခဲ့ပါတယျ။ Season တဈခုအတှငျးမှာ အငျအားကွီးအသငျးမြားနဲ့ ယငျးတို့ရဲ့ ကစားပုံမြားကို ပရိသတျအမြားက သိရှိလိုကွတဲ့အတှကျ League of Legends MSI ဟာ နှဈစဉျနှဈတိုငျး လူကွညျ့မြားတဲ့ပှဲမြား ဖွဈကွပါတယျ။
၄။ The International 2019 (အမြားဆုံးကွညျ့ရှုသူဦးရေ – ၁,၉၆၈,၄၉၇)
The International ပှဲမြားကတော့ Dota2ရဲ့ အကွီးမားဆုံးပွိုငျပှဲမြားပါ။ နှဈစဉျနှဈတိုငျး ကငျြးပမွဲဖွဈတဲ့ TI ပှဲမြားမှာ ခြီးမွှငျ့တဲ့ ဆုကွေးငှစေုစုပေါငျးဟာ တဈနှဈထကျ တဈနှဈ ပိုမိုမြားပွားလာခဲ့သလို ယခုနှဈ TI9 မှာလညျး Esports လောကတဈခုလုံးမှာပါ အမြားဆုံးဆုကွေးငှဖွေဈတဲ့ ဒျေါလာ ၃၄.၃ သနျး အထိ စံခြိနျတငျ ခြီးမွှငျ့ခဲ့ပါတယျ။ အသငျး ၁၈ သငျး ပါဝငျယှဉျပွိုငျခဲ့ကွပွီး Dota2သမိုငျးကွောငျးတဈလြှောကျ လူကွညျ့အမြားဆုံးပှဲလညျး ဖွဈခဲ့ပါတယျ။ လှနျခဲ့တဲ့နှဈက TI8 ကို အနိုငျရရှိခဲ့တဲ့ OG အသငျးဟာ ယခုနှဈ TI9 aegis ကိုလညျး အနိုငျဗိုလျစှဲသှားခဲ့ပွီး ဆုကွေးငှေ ဒျေါလာ ၁၆ သနျးနီးပါး အိမျပွနျသယျသှားနိုငျခဲ့ပါတယျ။
၃။ Free Fire World Series 2019 Rio (အမြားဆုံးကွညျ့ရှုသူဦးရေ – ၂,၀၁၆,၁၅၇)
Free Fire World Series 2019 Rio ဟာ ယခုစာရငျး ပါဝငျလာနိုငျခဲ့တဲ့ တဈခုတညျးသော မိုဘိုငျးလျဂိမျးပွိုငျပှဲပါ။ ရီယိုဒီဂနြေးရိုးမွို့မှာ ကငျြးပခဲ့တဲ့ Garena ရဲ့ မိုဘိုငျးလျ battle royale ဂိမျးပွိုငျပှဲကွီးဟာ ကွညျ့ရှုသူမြားပွားခဲ့ရုံသာမက မိုဘိုငျးလျ Esports လောကအတှကျ လိုအပျနတေဲ့ စံသတျမှတျခကျြမြားကိုလညျး ပွုလုပျပေးနိုငျခဲ့ပါတယျ။ လှနျစှာခမျးနားတဲ့ မိုဘိုငျးလျဂိမျးပွိုငျပှဲကွီးဖွဈခဲ့ပွီး ဘာသာစကား ၁၀ မြိုးနဲ့ တိုကျရိုကျထုတျလှငျ့ပွသခဲ့ပါတယျ။ ဖိုငျနယျပှဲစဉျမြားမှာ အိမျရှငျအသငျးဖွဈတဲ့ Team Corinthians က အနိုငျရ ဗိုလျစှဲသှားခဲ့ပါတယျ။ ၂၀၂၀ မှာ ဒီပှဲကွီးကို အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံ ဂြာကာတာမွို့မှာ ကငျြးပမယျ့အကွောငျးကိုလညျး အတညျပွုကွညောခဲ့ပွီး ဖွဈပါတယျ။
၂။ Fortnite World Cup 2019 Finals (အမြားဆုံးကွညျ့ရှုသူဦးရေ – ၂,၃၃၄,၈၂၆)
ဒီပှဲဟာ အသကျ ၁၆ နှဈ အရှယျ Fortnite ကစားသမား Bugha ကို ဒျေါလာ ၃ သနျးကြျော တဈကိုယျတျော အနိုငျရရှိပွီး နာမညျကြျောစခေဲ့တဲ့ ပှဲကွီးပါ။ Fortnite World Cup ပွိုငျပှဲဟာ ယခုနှဈမှာ စတငျကငျြးပတာဖွဈပမေယျ့ Esports သမိုငျးကွောငျးတဈလြှောကျ ကွညျ့ရှုမှုအလှနျမြားပွားတဲ့ပှဲတဈပှဲအဖွဈ မှတျတမျးတငျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ငယျရှယျတဲ့ fortnite ကစားသမားပေါငျးမြားစှာ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျခဲ့ကွပွီး ပှဲတှငျးဖြျောဖွမှေုအဖွဈ Marshmello ရဲ့ concert live show တောငျ ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။
၁။ League Worlds 2019 (အမြားဆုံးကွညျ့ရှုသူဦးရေ – ၃,၉၈၅,၇၈၇)
ကမ်ဘာ့ကစားသူအမြားဆုံး MOBA ဂိမျး League of Legends ရဲ့ ပွိုငျပှဲကွီးကတော့ တဈနှဈတာအတှငျးကွညျ့ရှုသူအမြားဆုံးပှဲအဖွဈလညျး စံခြိနျတငျနိုငျသှားခဲ့ပါတယျ။ League Worlds 2019 ရဲ့ ပှဲစဉျမြားကို ဥရောပရဲ့ အထငျကရမွို့မြားမှာ တဈလခနျ့အခြိနျယူ ပွုလုပျခဲ့တာဖွဈပွီး ဖိုငျနယျပှဲစဉျမြားကိုတော့ ပဲရဈမွို့မှာ ကငျြးပခဲ့ပါတယျ။ Grand final မှာ တရုတျအသငျး FunPlus Pheonix က G2 Esports ကို အနိုငျရ ဗိုလျစှဲကာ Summorner’s Cup ဖလားကွီးကို Louis Vuitton သတ်ေတာနဲ့ ထညျ့သှငျးယူဆောငျသှားခဲ့ပါတော့တယျ။
“၂၀၁၉ ရဲ့ ကြည့်ရှုသူအများဆုံး Esports ပွဲကြီးများ”
တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် ပိုမိုထွန်းကားလာတဲ့ Esports လောကမှာ ဂိမ်းဝါသနာရှင်ပရိသတ်အရေအတွက်ဟာလည်း များသထက် များလာခဲ့ပါတယ်။ မျက်မှောက်ခေတ် gamer များဟာ ယခင်ကလို ဂိမ်းကစားဖို့သာ အာရုံစိုက်နေကြတော့တာ မဟုတ်ပဲ Esports ပွဲများကို ကြည့်ရှုအားပေးဖို့ ပိုမိုအချိန်ပေးလာကြတာကိုလည်း တွေ့ကြရမှာပါ။
ဒါကြောင့်လည်း ၂၀၁၉ အတွင်း ကျင်းပခဲ့တဲ့ Esports ပွဲကြီးများဟာ ကြည့်ရှုသူ အလွန်များပြားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းအမျိုးအစားအလိုက် ကစားသူဦးရေ မတူညီကြလို့ ယင်းဂိမ်းများရဲ့ပွဲကြည့်ရှုသူပရိသတ်အရေအတွက်ဟာလည်း အနည်းအများ ကွာခြားသွားလေ့ရှိပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ လူပေါင်းသန်းချီ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ Esports ပွဲများရဲ့ အနာဂတ်ကတော့ တောက်ပလျက် ရှိပါတယ်။
၂၀၁၉ ရဲ့ ကြည့်ရှုမှုအများဆုံး Esports ပွဲများကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ကြပါတယ်။
၇။ BlizzCon 2019 Opening Ceremony (အများဆုံးကြည့်ရှုသူဦးရေ – ၁,၂၆၉,၄၃၆)
BlizzCon ပွဲကြီးကတော့ Blizzard ရဲ့ ပရိသတ်များ အထူးအားပေးခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့ ပွဲတစ်ပွဲပါ။ Hearthstone နဲ့ Overwatch World Championship ပြိုင်ပွဲများ၊ ဂိမ်းသစ် ကြေညာခြင်းများ၊ ဂိမ်း feature သစ် ကြေညာခြင်းများ၊ cosplay ပြိုင်ပွဲများ စ တာတွေကို ပရိသတ်အများ ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ Stream အတွင်း နိုင်ငံရေးလှုံ့ဆော်စကားပြောခဲ့တဲ့ Hearthstone pro တစ်ဦးကို Blizzard က ban ခဲ့ပြီး ဆန္ဒပြမှုများဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့အတွက်လည်း BlizzCon ရဲ့ ကြည့်ရှုသူဦးရေ မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။
၆။ Nintendo E3 2019 (အများဆုံးကြည့်ရှုသူဦးရေ – ၁,၄၄၆,၁၉၈)
Nintendo E3 Expo ပွဲကြီးများဟာ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကျင်းပလေ့ရှိတဲ့ ပွဲများပါ။ Nintendo E3 အတွင်းမှာ Bethesda, Ubisoft, Square Enix စ တဲ့ ကုမ္ပဏီများရဲ့ဂိမ်း developer showcase များ၊ Super Smash Bros. Ultimate နဲ့ Fortnite တို့လို နာမည်ကျော်ဂိမ်းများ အပါအဝင် ဂိမ်းပေါင်းများစွာတို့ရဲ့ ပြိုင်ပွဲငယ်များ၊ ဂိမ်းသစ် ကြေညာခြင်းများ စ တာတွေ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ Cyberpunk 2077, Star Wars: Fallen Order စတဲ့ ဂိမ်းသစ်များကို ကြေညာခဲ့တဲ့အချိန်မှာ ပရိသတ်များ အထူးစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရပါတယ်။
၅။ Mid-Season Invitational 2019 (အများဆုံးကြည့်ရှုသူဦးရေ – ၁,၇၀၄,၃၂၆)
ဒီပွဲကတော့ League of Legends season9ရဲ့ အလယ်ပိုင်းမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပွဲပါ။ League of Legends MSI 2019 လို့လည်း ခေါ်တွင်ကြတဲ့ ဒီပွဲမှာ စုစုပေါင်းအသင်း ၁၃ သင်း ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပြီး ဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်များမှာ ဥရောပအသင်း G2 Esports က မြောက်အမေရိကအသင်း Team Liquid ကို အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ Season တစ်ခုအတွင်းမှာ အင်အားကြီးအသင်းများနဲ့ ယင်းတို့ရဲ့ ကစားပုံများကို ပရိသတ်အများက သိရှိလိုကြတဲ့အတွက် League of Legends MSI ဟာ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း လူကြည့်များတဲ့ပွဲများ ဖြစ်ကြပါတယ်။
၄။ The International 2019 (အများဆုံးကြည့်ရှုသူဦးရေ – ၁,၉၆၈,၄၉၇)
The International ပွဲများကတော့ Dota2ရဲ့ အကြီးမားဆုံးပြိုင်ပွဲများပါ။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကျင်းပမြဲဖြစ်တဲ့ TI ပွဲများမှာ ချီးမြှင့်တဲ့ ဆုကြေးငွေစုစုပေါင်းဟာ တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် ပိုမိုများပြားလာခဲ့သလို ယခုနှစ် TI9 မှာလည်း Esports လောကတစ်ခုလုံးမှာပါ အများဆုံးဆုကြေးငွေဖြစ်တဲ့ ဒေါ်လာ ၃၄.၃ သန်း အထိ စံချိန်တင် ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ အသင်း ၁၈ သင်း ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပြီး Dota2သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက် လူကြည့်အများဆုံးပွဲလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က TI8 ကို အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ OG အသင်းဟာ ယခုနှစ် TI9 aegis ကိုလည်း အနိုင်ဗိုလ်စွဲသွားခဲ့ပြီး ဆုကြေးငွေ ဒေါ်လာ ၁၆ သန်းနီးပါး အိမ်ပြန်သယ်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
၃။ Free Fire World Series 2019 Rio (အများဆုံးကြည့်ရှုသူဦးရေ – ၂,၀၁၆,၁၅၇)
Free Fire World Series 2019 Rio ဟာ ယခုစာရင်း ပါဝင်လာနိုင်ခဲ့တဲ့ တစ်ခုတည်းသော မိုဘိုင်းလ်ဂိမ်းပြိုင်ပွဲပါ။ ရီယိုဒီဂျနေးရိုးမြို့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ Garena ရဲ့ မိုဘိုင်းလ် battle royale ဂိမ်းပြိုင်ပွဲကြီးဟာ ကြည့်ရှုသူများပြားခဲ့ရုံသာမက မိုဘိုင်းလ် Esports လောကအတွက် လိုအပ်နေတဲ့ စံသတ်မှတ်ချက်များကိုလည်း ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ လွန်စွာခမ်းနားတဲ့ မိုဘိုင်းလ်ဂိမ်းပြိုင်ပွဲကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီး ဘာသာစကား ၁၀ မျိုးနဲ့ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပါတယ်။ ဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်များမှာ အိမ်ရှင်အသင်းဖြစ်တဲ့ Team Corinthians က အနိုင်ရ ဗိုလ်စွဲသွားခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၂၀ မှာ ဒီပွဲကြီးကို အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျာကာတာမြို့မှာ ကျင်းပမယ့်အကြောင်းကိုလည်း အတည်ပြုကြေညာခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ Fortnite World Cup 2019 Finals (အများဆုံးကြည့်ရှုသူဦးရေ – ၂,၃၃၄,၈၂၆)
ဒီပွဲဟာ အသက် ၁၆ နှစ် အရွယ် Fortnite ကစားသမား Bugha ကို ဒေါ်လာ ၃ သန်းကျော် တစ်ကိုယ်တော် အနိုင်ရရှိပြီး နာမည်ကျော်စေခဲ့တဲ့ ပွဲကြီးပါ။ Fortnite World Cup ပြိုင်ပွဲဟာ ယခုနှစ်မှာ စတင်ကျင်းပတာဖြစ်ပေမယ့် Esports သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက် ကြည့်ရှုမှုအလွန်များပြားတဲ့ပွဲတစ်ပွဲအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ငယ်ရွယ်တဲ့ fortnite ကစားသမားပေါင်းများစွာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပြီး ပွဲတွင်းဖျော်ဖြေမှုအဖြစ် Marshmello ရဲ့ concert live show တောင် ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
၁။ League Worlds 2019 (အများဆုံးကြည့်ရှုသူဦးရေ – ၃,၉၈၅,၇၈၇)
ကမ္ဘာ့ကစားသူအများဆုံး MOBA ဂိမ်း League of Legends ရဲ့ ပြိုင်ပွဲကြီးကတော့ တစ်နှစ်တာအတွင်းကြည့်ရှုသူအများဆုံးပွဲအဖြစ်လည်း စံချိန်တင်နိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။ League Worlds 2019 ရဲ့ ပွဲစဉ်များကို ဥရောပရဲ့ အထင်ကရမြို့များမှာ တစ်လခန့်အချိန်ယူ ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်များကိုတော့ ပဲရစ်မြို့မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ Grand final မှာ တရုတ်အသင်း FunPlus Pheonix က G2 Esports ကို အနိုင်ရ ဗိုလ်စွဲကာ Summorner’s Cup ဖလားကြီးကို Louis Vuitton သေတ္တာနဲ့ ထည့်သွင်းယူဆောင်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။